Aba & oche - China Gormeet Plastic
ISO 9000: 2008 Certified factory
Jikọọ na anyị:
Dutou Industrial Mpaghara, South District, Zhongshan City, Guangdon
Kpọọ Anyị On
Mail Anyị @
Fụọnụ Nkedo Procucts
Fụọnụ ịkpụzi Ngwá Ọrụ ikpe
Fụọnụ ịkpụzi ogwe, Tables
Ime ụlọ na n'èzí akụrụngwa
Aba & oche
Okporo ụzọ Safety Products
Ọgwụ na ịkpụzi Products
Isiokwu na oche
Modular sere n'elu cubes
Modular sere n'elu Systems
Ntụrụndụ na egwuregwu n'elu ikpo okwu
Jet skai n'ọdụ ụgbọ mmiri na-agba ụgbọ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri
Sere n'elu na-arụ ọrụ n'elu ikpo okwu
Sere n'elu na-egwu mmiri
ese n'elu mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri
Sere n'elu àkwà mmiri na walkway
Onu azu ugbo n'elu ikpo okwu
Sere n'elu Solar System
Igbu ịkpụzi usoro na-n'ọtụtụ ebe, eji na oche na-amị, na ngwaahịa na-chemical kwụsie ike, acid, mgbochi static, oyi & okpomọkụ na-eguzogide, agba kwụsiri ike, na mfe iji wụnye na jikwaa. E nwere tumadi abụọ na ụdị nke anyị na: nwata ụgbọ ala oche, nkịtị were oche. Baby ụgbọ ala oche, booster oche Ma maka obere njem ma ọ bụ ogologo njem, ụgbọ ala oche ndị dị oké mkpa ihe maka ụmụaka, na nwa nchekwa oche na-atụle ga-otu n'ime ụzọ kasị dị irè iji gbochie ụmụ mberede mmerụ ...
Kpụrụ Exterior Nhọrọ
Ịkwụ ụgwọ Okwu
1. Rainbow nke agba
2. Omenala Logo efere na Kpụrụ
3. ẹkebọkde Lettering
4. Full Omenala mkpuchi oghere efere
5. stacking Njirimara
Igbu ịkpụzi usoro na-n'ọtụtụ ebe, eji na oche na-amị, na ngwaahịa na-chemical kwụsie ike, acid, mgbochi static, oyi & okpomọkụ na-eguzogide, agba kwụsiri ike, na mfe iji wụnye na jikwaa.
E nwere tumadi abụọ na ụdị nke anyị na: nwata ụgbọ ala oche, nkịtị were oche.
Baby ụgbọ ala oche, booster oche
Ma maka obere njem ma ọ bụ ogologo njem, ụgbọ ala oche ndị dị oké mkpa ihe maka ụmụaka, na nwa nchekwa oche na-atụle ga-otu n'ime ụzọ kasị dị irè iji gbochie ụmụ mberede mmerụ n'ihe mberede okporo ụzọ.
Anyị na-enye ụgbọala ahụ oche maka afọ niile, site mụrụ ọhụrụ ụgbọ ala oche booster oche mere maka okenye ụmụ.
· Mere nke mbụ HDPE
Edo ọkpụrụkpụ na ike crashworthiness
Ọkara elu molekụla, na-ọma mmetụta na-eguzogide
Nwere ike na-emepụta plastic etiti naanị, ma ọ bụ kpọkọta akụkụ ahụ niile na-etolite okokụre ngwaahịa.
Common Iji oche
Anyị hazie oche Ọdịdị dị ka ọrụ gị mkpa, na-eme ka ha un-nkwarụ dabara maka ndị ọzọ akụkụ nke na ngwaahịa, n'ihi na ihe atụ, handrails, backrests na na. Anyị usoro nwere ike kpomkwem ịchịkwa size n'oge mmepụta n'ime allowable tolerances, na mgbe nile eme nke ọma na-achịkwa na agba n'etiti dị iche iche batches.
Oche nwere ike textured ebupụta & dị iche iche shapes, ọdịdị, ụcha & mgbagwoju.
Materials gụnyere ma na-ejedebeghị na:
Services gụnyere ma na-ejedebeghị na:
· Akpụzi n'ichepụta
· Product nkwalite
· Mmezu nke inyeaka arụmọrụ
· Ịzụ subcomponents
· Assembly na nkwakọ
· Direct mbupu ka a atọ
Idenye aha Newslatter
Dutou Industrial Mpaghara, South District, Zhongshan City, Guangdong, China.
© Copyright - 2018: All Rights echekwabara.